နူးကမ့်မှာ ရီးယဲလ် အရှက်တကွဲ ရှုံးခဲ့တာက ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်ပါဘူး
နူးကမ့်ကွင်းမှာ ရီးယဲလ်ကို ဘာစီလိုနာ ဂိုးပြတ် အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ El Clásico ပွဲများ
29 Oct 2018 . 4:05 PM
(၈၉)ကြိမ်မြောက် El Clásico ပွဲကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ရလဒ်ကတော့ ပရိသတ်တွေ သိတဲ့အတိုင်း ဘာစီလိုနာက (၅-၁)ဂိုးနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားကို အနိုင်ယူပြီး သူတို့ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ပြိုင်ဘက်ကို နလန်မထူအောင် ချေမှုန်းပစ်ခဲ့တယ်။ နူးကမ့်မှာ ရီးယဲလ် မရှုမလှဖြစ်ခဲ့တာက ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးး။ လာလီဂါပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာ ဘာစီလိုနာကို ဆိုးရွားတဲ့ ရလဒ်တွေနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေရှိခဲ့ပြီး Akhayar Sports ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ဘာစီလိုနာ ၇-၂ ရီးယဲလ် (၂၄-၉-၁၉၅၀)
၁၉၅၀-၅၁ ရာသီ လာလီဂါပွဲစဉ် (၃)အဖြစ် နူးကမ့်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းက (၇-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ရီးယဲလ်ဘက်ကို ဘာစီလိုနာ ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူတဲ့ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။
ဘာစီလိုနာ ၅-၀ ရီးယဲလ် (၈-၁-၁၉၉၄)
ဒီပွဲကတော့ ၁၉၉၃-၉၄ ရာသီ ပွဲစဉ်(၁၈)အဖြစ် ဆုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းက ရိုမာရီယို Romario ရဲ့ ဟက်ထရစ်၊ ရော်နယ်လ်ကိုးမန်း Ronald Koemman ၊ အီဗန်အီဂလီစီယာ Ivan Iglesias တို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တယ်။
ဘာစီလိုနာ ၅-၀ ရီးယဲလ် (၂၉-၁၁-၂၀၁၀)
မော်ရင်ဟို Mourinho ရဲ့ ပထမဆုံး ရီးယဲလ်နည်းပြဘ၀မှာ အရှက်တကွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲပါ။ Tiki Taka ကစားကွက်နဲ့ အောင်ပွဲခံနေတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းက ဇာဗီ Xavi ၊ ပတ်ဒရို Pedro (၂ဂိုး) ၊ ဒေးဗစ်ဗီလာ David Villa ၊ ဟွမ်ဖရန် Jeffren တို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဒါဟာ မော်ရင်ဟို နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် အကြီးမားဆုံး ဂိုးပြတ် ရှုံးပွဲပါပဲ။
လာလီဂါမှာ ဘာစီလိုနာကို ရီးယဲလ် ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုများ
Barcelona 5–1 Real Madrid 28 October 2018
Akhayar Sports ပရိသတ်ကြီးရေ . . ဒါတွေကတော့ လာလီဂါ အိမ်ကွင်းပွဲမှာ ဘာစီလိုနာ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ El Clásico ပွဲတွေပါပဲ။ ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က စပြီး အဓိကတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi မပါဝင်တဲ့ El Clásico ပွဲ (၃)ပွဲမှာ ပထမဆုံး နိုင်ပွဲရယူခဲ့တာဖြစ်သလို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေ အကြီးအကျယ်ကို အောင်ပွဲခံနေလောက်ပါပြီ . . .
Photo:Goal,YouTube,CNN International,Sporting News
နူးကမျ့ကှငျးမှာ ရီးယဲလျကို ဘာစီလိုနာ ဂိုးပွတျ အနိုငျယူခဲ့တဲ့ El Clásico ပှဲမြား
(၈၉)ကွိမျမွောကျ El Clásico ပှဲကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ပွီးပါပွီ။ ရလဒျကတော့ ပရိသတျတှေ သိတဲ့အတိုငျး ဘာစီလိုနာက (၅-၁)ဂိုးနဲ့ ပွတျပွတျသားသားကို အနိုငျယူပွီး သူတို့ရဲ့ သမိုငျးကွောငျး ပွိုငျဘကျကို နလနျမထူအောငျ ခမြှေုနျးပဈခဲ့တယျ။ နူးကမျ့မှာ ရီးယဲလျ မရှုမလှဖွဈခဲ့တာက ဒါ ပထမဆုံးအကွိမျတော့ မဟုတျပါဘူးး။ လာလီဂါပွိုငျပှဲတဈလြှောကျမှာ ဘာစီလိုနာကို ဆိုးရှားတဲ့ ရလဒျတှနေဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲတှရှေိခဲ့ပွီး Akhayar Sports ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ဘာစီလိုနာ ၇-၂ ရီးယဲလျ (၂၄-၉-၁၉၅၀)
၁၉၅၀-၅၁ ရာသီ လာလီဂါပှဲစဉျ (၃)အဖွဈ နူးကမျ့မှာ ဆုံတှခေဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာအသငျးက (၇-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ဒါဟာ ရီးယဲလျဘကျကို ဘာစီလိုနာ ဂိုးအမြားဆုံး သှငျးယူတဲ့ပှဲအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။
ဘာစီလိုနာ ၅-၀ ရီးယဲလျ (၈-၁-၁၉၉၄)
ဒီပှဲကတော့ ၁၉၉၃-၉၄ ရာသီ ပှဲစဉျ(၁၈)အဖွဈ ဆုံတှခေဲ့တာဖွဈပွီး ဘာစီလိုနာအသငျးက ရိုမာရီယို Romario ရဲ့ ဟကျထရဈ၊ ရျောနယျလျကိုးမနျး Ronald Koemman ၊ အီဗနျအီဂလီစီယာ Ivan Iglesias တို့ရဲ့ ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျယူခဲ့တယျ။
ဘာစီလိုနာ ၅-၀ ရီးယဲလျ (၂၉-၁၁-၂၀၁၀)
မျောရငျဟို Mourinho ရဲ့ ပထမဆုံး ရီးယဲလျနညျးပွဘဝမှာ အရှကျတကှဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲပါ။ Tiki Taka ကစားကှကျနဲ့ အောငျပှဲခံနတေဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးက ဇာဗီ Xavi ၊ ပတျဒရို Pedro (၂ဂိုး) ၊ ဒေးဗဈဗီလာ David Villa ၊ ဟှမျဖရနျ Jeffren တို့ရဲ့ ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျရခဲ့ပွီး ဒါဟာ မျောရငျဟို နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ အကွီးမားဆုံး ဂိုးပွတျ ရှုံးပှဲပါပဲ။
လာလီဂါမှာ ဘာစီလိုနာကို ရီးယဲလျ ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့မှုမြား
Akhayar Sports ပရိသတျကွီးရေ . . ဒါတှကေတော့ လာလီဂါ အိမျကှငျးပှဲမှာ ဘာစီလိုနာ ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ El Clásico ပှဲတှပေါပဲ။ ဘာစီလိုနာအသငျးအနနေဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှဈက စပွီး အဓိကတိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi မပါဝငျတဲ့ El Clásico ပှဲ (၃)ပှဲမှာ ပထမဆုံး နိုငျပှဲရယူခဲ့တာဖွဈသလို ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ကနြေပျစရာဖွဈခဲ့တယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ဘာစီလိုနာပရိသတျတှေ အကွီးအကယျြကို အောငျပှဲခံနလေောကျပါပွီ . . .